Into enjengale umuthi wendabuko, kukhona isikhathi eside kakhulu kuneminyaka version yayo okhokhelwayo. Phela, nemvelo qamba bonke izimo zakhe kunesidingo. In the field, emahlathini nje phansi kwezinyawo zakho zikhule kwezinhlobo ezahlukene flora ukuthi elaphe kithi kusuka ezihlukahlukene izifo. Kodwa, njenganoma iyiphi imithi, izitshalo ezifana kungaba ngokulinganayo abangele kube nomphumela omubi. Ngakho-ke, zisebenzise ngaphandle kokukhuluma kwezazi, kuyingozi kakhulu. Futhi esinye salezi izitshalo iyona celandine. Izimo futhi ngezici zawo zokwelapha sibanzi ukuze kungabi udokotela lapha abukhuni ukuphatha.
Celandine ikhula ngokoqobo kuzo zonke izindawo. ERussia, e-Asia Ephakathi, ungathola lokhu imbiza eCaucasus noma Ukraine. Okuwukuphela eNyakatho Ekude ne sezulu layo aqinise isandla ngokweqile. Lesi sitshalo ingatholakala ehlathini emahlathini, ezintabeni emathafeni, ekhishini, amasimu ezithelo futhi nje emathilomu nasemgwaqweni. Mhlawumbe lokhu kwaba ngesisekelo ukutholakala nokuthi ukusetshenziswa celandine wendabuko imithi uyathandwa.
Futhi isetshenziswa ekwelapheni ezihlukahlukene izifo. Lokhu izifo zesikhumba, izifo of iyiphi indawo emlonyeni nasemphinjeni, sesibindi gallbladder. Lesi sihlahlana ngokuyisimangaliso kuzosiza ukuphulukisa ipheshana wokugaya ukudla, ngomgudu womchamo abese biliary nezinso, kanye nomfutho wegazi kanye komzimba. Ngaphezu kwalokho, imiphumela emihle ubonisa ukusetshenziswa celandine in Oncology imithi. Kodwa noma yini kungenzeka ukuthi kwakungesikhathi celandine ewusizo, Izimo ukusetshenziswa kwaso sisekhona. Overdose izidakamizwa ezenziwe kuwo kungabangela isicanucanu nokuhlanza, futhi ukukhubazeka ngezinye izikhathi ngisho zokuphefumula. Ngakho-ke ukuhlonitjhwa celandine kufanele sihlangabezane phytotherapeutist.
Abantu baqala ukusebenzisa izakhiwo ezuzisayo zalesi sitshalo isikhathi eside. Ngosizo lwawo ukuqeda namaqhubu, nezinduna, warts kanye corns, futhi ngezinye izikhathi freckles. Ngaphezu igama elisemthethweni abantu sengimnika enye eningi yayo. Lokhu "vincetoxicum" futhi "schelkunets" futhi "nipplewort" nezinye ezifanayo eziningi. Wabuye wathola igama layo ngokuthi "ginseng Russian".
Sekungamakhulu eminyaka, Abelapha kanye nezinyanga wafunda kahle celandine, Izimo e uhlelo lwayo lokusebenza. Baye bafunda ukuyisebenzisa kahle dosed ezihlukahlukene zokupheka. It is arcade esetshenziswa Izingxube namanye amakhambi. Uma ithisipuni elilodwa zalesi sitshalo kuthiwa steamed enkomishini yamanzi abilayo, kuyobahambela tincture celandine. Lokhu umthamo kuyinto umthamo kakhulu nomuntu omdala, angase aqashe usuku. Futhi lokhu ukumnika Kufanele kuthathwe 5-6 ukudla usuku lonke. Ungakwazi namanje ukwamukela kanye umpe celandine. Kodwa dosed amathonsi, okuyinto ezifuywa emanzini. Futhi wamukelekile izidakamizwa ezifana wenziwa iphethini letsite, owenza izindlela uchwepheshe kulo mkhakha.
Uma ukwa stem celandine, ijusi kuyoba. Anakho isitini umbala obomvu ezijulile ophuzi, futhi ngezinye izikhathi. Ngasekuqaleni kwaleli juice iphathwa kanye nezinduna, amaqhubu calluses, nokuningi. Warts noma nezinduna wetted ngamanzi, bese wagcoba ijusi zalesi sihlahla. Le nqubo yaphindaphindwa 2-3 izikhathi ngosuku. Futhi, lolu juice ezigcotshwe izilonda ukuthi musa ukuphulukisa. Uwoyela ubulala amagciwane nokunye esheshisa inqubo ukuphulukiswa.
Lokhu kusebenza futhi isitshalo okwelapha nokwelashwa psoriasis, utwayi, futhi eczema. Kodwa ungakhohlwa ukuthi ushevu kuyinto celandine. Izimo kudingeka kucatshangelwe futhi uhambisane ukunemba ekwelapheni kubo. Ekwelapheni celandine futhi kudinga ukuphikelela ukungaguquguquki. Uma, ukwenza isibonelo, ugeza nge celandine, kungenzeka ukuqeda izifo zesikhumba ezehlukene ezifana nama-ulcer ahlukahlukene, eczema, utwayi, nabanye. Kodwa kubala zonke izinzuzo ezingase zilethe "ginseng Russian" kunzima kakhulu. Futhi uma hhayi ukuzithiba medicate, kuyoba ingagwenywa imiphumela edabukisayo. Bese konke kuzolunga.
Turmeric ngamanzi: izinzuzo futhi efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka
Chevrolet Lacetti esiteshini enqoleni - ibhizinisi obugagu ngesikhathi intengo imali